BAARLAMAANKA SOOMAALIYEED OO KALSOONIDII KALA NOQONAYA DAWLADDA KMG AH EE CALI KHALIIF MADAXDA KA YAHAY !
Mogadishu,11th October 2001
Kadib markii uu shalay kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho Guddoomiye Cabdalla Deeroow Isaaq in Dawladda KMG ah ee Soomaaliyeed ee uu madaxda ka yahay Cali Khaliif Galaydh ay si buuxda ugu fashilantay xilkeedii, ayaa kulan aan caadi ahayn isugu yimaadeen maanta (11/10/2001) xubnaha Golaha Shacabka, si ay uga doodaan bal inay kala noqdaan kalsoonidii Dawladda KMG ah , waxaana shir Guddoomiy ka ahaa isla Cabdalla Deeroow .
Waxaana looga hadlay dhibaatada dhaqaale ee ka jirta dalka , gaar ahaanna mushkiladda ay keentay diidmada lacagta shanta boqol ah iyo ta N-da ah , iyadoo si buuxda loogu dhaleeceey doodaas Cali Khaliif Galaydh oo wax ka qaban waayay dhaqaalaha dalka oo marba marka ka danbeyso ka sii darayo .
Waxaa xusid mudan in Baarlamaanka Soomaaliyeed uu horey u diiday lacagaha beenabuurka ah ee dalka soo galayay, isagoo in badan ku booriyay inay Dawladdu wax ka qabato, laakiin nasiibdarro taa ma dhicin , iminka waxaa shacabka guranayaa mirihii ka dhashay khaladaadkaas baaxadda weyn leh.
Guddoomiye Cabdalla Deerrow Isaaq ayaa ka sheegay shirkaa inuu furan yahay wixii maanta ka danbeeya mooshin cod loogu qaadayo in kalsoonida lagala noqdo Dawladda, waxaa mooshinkaas hore u soo bandhigay qaar ka tirsan Golaha Shacabka KMG ah .
Sida laga warqabo, waxaa beryahan Magalamadaxda Muqdisho ka jiray xiisaddo iyo banaanbaxyo ka dhan ah Dawladda KMG ah oo keenay dhimasho iyo dhaawacyaba , waxaana dalka ka maqan Ra'iisul Wasaare Cali Khaliif iyo Wasiiro badan oo ay ka mid yihiin ka Arrimaha Dibedda,Wasiirka Maaliyadda, Wasiirka Xanaanada Xoolaha,Wasiirka Cadaaladda,Wasiirka Ganacsiga, iyo qaar kale .